teknoolojiyada cusub - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Bogga guriga Calaamadda tikniyoolajiyadda cusub
Calaamadda: tikniyoolajiyadda cusub
Shirkadda Skoda ayaa soo bandhigtay baabuur laga gooyay wasakhda dabocase
Shirkadda Czech ee Skoda ayaa qorshaynaysa inay u adeegsato agab bay'ada u habboon soo -saarka walxaha goos -gooska ee gudaha baabuurka. Shirkadda ayaa mar hore soo saartay nuqul keliya ...
Agrotrade 20! Ganacsi tayo leh
Taariikhda Shirkadda Agrotrade waxay si aan kala sooc lahayn loola xiriirinayaa taariikhda warshadaha baradhada oo dhan ee casriga Ruushka. Mashruucan wuxuu ku soo aaday xilli danta ...
Shirkadda Yukreeniyaan waxay goosatay dalaggii baradhada ee ugu horreeyay oo la beeray iyada oo aan faragelin bani’aadamka lagu sameyn
Shirkadda Yukreeniyaan ee DroneUA waxay ku guuleysatay inay ku beero dhowr digriiga baradho ah iyada oo aan wax faragelin ah lagu sameynin dadka, iyadoo la adeegsanaayo beeraha robotic. Digriiga weli waa cabirkii digirta, ...